News | तीज
News | Tag: तीज
तीजका नाममा अभद्र श्रव्यदृश्य समावेश नगर्न लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले तीजका नाममा अभद्र श्रव्यदृश्य समावेश नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिष्ठानले एक अपिल जारी गर्दै अभद्र श्रव्यदृश्य समावेश नगर्न आग्रह गरेको हो ।
आज हरितालिका तीज, यस्तो छ व्रत बस्नुको धार्मिक मान्यता
काठमाडौं । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । शास्त्रीय रुपमा महिला, पुरुष दुवैले हरितालिका (तीज) को व्रत गर्नुपर्ने मान्यता भएपनि महिलाले श्रीमानको दीर्घायुको कामनाका लागि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ ।
'यो वर्ष कोठामै बसेर तीज जाने भयो'
काठमाडौँ । स्थिति ठीकठाक हुन्थ्यो भने यतिबेला तीजको रौनक छाइसक्थ्यो । महिनादिन अघिदेखि नै महिलाहरु दर, नाचगान र शुभकामना साटासाटमा व्यस्त बन्थे । छोरीचेली माइत जाने सुरसारमा हुन्थे ।
कैलाली । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि कैलालीमा सामूहिकरूपमा गौरा तथा तीज नमनाउन आग्रह गरिएको छ । जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सामूहिकरूपमा गौरा तथा तीज नमनाउन आग्रह गरेको हो ।
तीजकाे व्रत सकिएपछि के खाने ? कसरी खाने ?
एजेन्सी । तीजमा दिनभरको व्रत सकिएपछि पनि बेलुका अन्न नखाने धार्मिक मान्यता छ । व्रतको दिन बेलुका फलफूल र झोलयुक्त पदार्थ भने खान धार्मिक छुट छ ।
तीजमा पशुपतिनाथ : दिउँसो २ बजेसम्म करीब चार लाख भक्तजनले गरे दर्शन
काठमाडौँ । काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा यस वर्ष दर्शनार्थीले सहज रुपमा दर्शन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गरिएको पाइएको छ । आज बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिनाथका चारै ढोका खुला गरिएको थियो ।